Ny endrika fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear | Androidsis
Toy izany koa izay mitranga amin'ny Android amin'ny finday avo lenta sy ny takelaka, Android Wear dia miavaka, ankoatry ny lafiny hafa, ho an'ny ambaratonga fanaingoana azy ary indrindra ny fahafaha-manaingo ny endrik'ireo fiambenana azy, fantatra koa amin'ny endrika fiambenana na tarehy fiambenana.
Na dia fomba amam-panao kely aza io amin'ny resaka fiasa, mamela ny famantaranandronao ny fanaingoana ny tarehy fiambenana Android Wear dia toa araka ny itiavanao azy, inona ho tena anao, tsy manam-paharoa, manavaka ary tsy mitovy amin'ny hafa rehetras. Ho an'ity, misy safidy isan-karazany, fa anio amin'ny Androidsis dia hasehoko anao ny sasany amin'ireo fiambenana tsara indrindra miasa miaraka amin'ny Android Wear sy Android Wear 2.0. Hanomboka ve isika?
2 2 Endriky ny fiambenana tsara tarehy
3 Widgets Cloud Bubble + mitafy
5 Faces Watch Facer
6 Mijery tarehy - Minimal & Elegant
Andao atomboka amin'ny iray amin'ireo fiambenana mirindra indrindra ho an'ny Android Wear, Black Metal HD Watch Face, endrika fiambenana tsara ho an'ny mpitsangatsangana kokoa. Manolotra a endrika mainty borosy endrika mainty, ary manana singa namboarina ao anatin'ny singa "Fahasarotana" vaovao nampidirina ao amin'ny Android Wear 2.0. Araka izany, azonao atao ny mijery ny toetoetran'ny bateria (na telefaona na fiambenana), Google Fit, toetr'andro ankehitriny ary maro hafa.
Ity tarehy fiambenana ity dia manana ny zavatra rehetra ilainao ary manolotra fahombiazana lehibe mandritra izany io dia iray amin'ireo sehatra tsotra indrindra, fa ny tsara indrindra avy amin'ny Android Wear.
2 Endriky ny fiambenana tsara tarehy
2 Endriky ny fiambenana tsara tarehy es endrika famantaranandro tsotra, mahitsy, fa manao tsara ny asany izany. Izany koa mifanaraka amin'ny Complications amin'ny Android Wear 2.0 hahafahanao manamboatra singa mba hanana lafin-javatra foana toy ny famantaranandro na baterin'ny telefaona, statistikan'i Google Fit, ny fijanonana an-jaridaina, ny famantaranandro ary ireo singa ilaina hafa hita.
Topazo maso ireo sisa amin'ireo famantaranandro noforonin'i RichFace, maro amin'izy ireo koa no mifanaraka amin'ny Android Wear 2.0.
Widgets Cloud Bubble + mitafy
Bubble Widget and Wear Launcher dia manolotra endrika fiambenana mifanentana amin'ny Android Wear 2.0. Amin'ny ankapobeny dia mpandefa fampiharana izay lasa endrika fiambenana amin'ny famantarananao. Mazava ho azy, ho hitanao ny fotoana, fa hanana hitsin-dàlana isan-karazany ihany koa ianao hanokafana haingana ireo rindranasa ampiasainao matetika.
Apetraho eo amin'ny efijery finday amin'ny telefaona Android Wear na fijerinao ilay fampiasa "rahona boribory" amin'ny fomba Apple Watch.
Pujie Black Watch Face dia endrika fiambenana iray hafa ho an'ny Android Wear tena azo namboarina toy ny manolotra anao ny fitaovana ilaina mba hahafahanao mamolavola tarehy mijery arakaraka ny safidinao.
Izy io koa dia mifanaraka amin'ny Android Wear 2.0 komplications, ary afaka miasa ho mpandefa fampiharana miaraka amin'ny hitsin-dàlana amin'ireo fampiharana napetraka amin'ny famantarananao.
Tsy manana kinova maimaimpoana izany ka raha manandramana azy dia mila mandoa 1,49 euro ianao, vidiny tena heverina raha jerena ny toetrany.
Faces Watch Facer
Faces Watch Facer dia fampiharana tany am-boalohany izay mamela anao hamorona endrika fiambenana anao manokana ho an'ny Android Wear. Manome anao modely miaraka amin'ny torolàlana vitsivitsy ny fampiharana ary manomboka eo, manomboka ny fanandramana sy ny fanandramana. Marina fa manana làlan-dàlana hianarana izy io, saingy aza matahotra, raha diso tafahoatra ianao, azonao atao ny misintona ny volavola noforonin'ireo mpampiasa hafa. Manana ny safidiny endrika fiambenana mihoatra ny 15.000, maro amin'izy ireo no afaka ary misy ny hafa karama.
Etsy andanin'izany, mifanaraka amin'ny Android Wear 2.0 ihany koa izy ary miaraka amin'ny Complications vaovao.
Facer: sary mihetsika
Mijery tarehy - Minimal & Elegant
Ary hofaranantsika miaraka amin'ny Android Wear ity safidin'ireo fiambenana mijery ity Mijery tarehy - Minimal & Elegant, mifanentana amin'ny Android Wear 2.0 sy ny fahasarotana ao aminy, manome maherin'ny 20.000 endrika endrika fiambenana izy ary koa fanohanana ny fampiharana manokana toa ny Spotify, Pocket Casts sy ny hafa. Vidiny amin'ny € 1,59, izy no iray amin'ireo fampiharana endrika fiambenana tsara indrindra.
Jereo ny tarehy - Minimal & Elegant ho an'ny Android Wear OS
Mazava ho azy fa mbola misy maro hafa ao amin'ny Play Store, sady karama no maimaim-poana. Iza amin'ireo no ampiasainao? Misy amin'ireto lisitra ireto ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny endrika fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear
Pujie Black manimba ny baterin'ny famantaranandro ary mahatonga ny telefaona finday hamerina matetika foana na hamono tena
Fitsapana hafainganam-pandeha: Samsung Galaxy S8 vs LG G6